Faroole oo Xasan Sheekh ugu Baaqay in uu Is-Casilo – Radio Daljir
Faroole oo Xasan Sheekh ugu Baaqay in uu Is-Casilo
Seteembar 26, 2015 4:44 b 0
Sabti, September 26, 2015 (HOL) —
Sabti, September 26, 2015 (Daljir) —Madaxweynihii hore ee Puntland, C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa ugu baaqay inuu is-casilo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ku eedeeyay in saddexdii sano ee xafiiska joogay ay kaga dhamaatay khilaaf iyo is-qab-qabsi.
Faroole oo ka Hadlayay Garoowe ayaa Sheegay in Saddexdii Sano ee Xasan Sheekh uu ahaa madaxweynaha aysan waxba qaban, isla markaana tahay saddex sano khasaartay.
“Saddexdii sano wax la sheego oo la qabto ma jirto, wax khasaaray mooyaane, saddex sano waxay kaga dhamaatay khilaaf gudaheeda ah iyo dhowr Ra’iisul wasaare oo la bedelay, maamulladii loo igmaday oo khilaaf soo kala dhex-galay, maantana wuxuu khilaaf dhex-taagan labadii hay’adood ee Madaxtooyada iyo Baarlamaanka,” ayuu yiri C/raxmaan Faroole.
Madaxweynihii hore ee Puntland ayaa xusay inuu qabo in doorasho Somalia ka dhici karto haddii si fiican loo shaqeeyo, isagoo xusay inuusan garan karin wax aan doorasho ahayn oo doorasho ah inay dalka ka dhacdo.
“Heshiiska hadda lasoo saaray ee Beesha Caalamka door ku lahayd, ee la leeyahay waxaa la raadinayaa waxaan doorasho aan ahayn oo doorasho ah, aniga ma garan waxaan doorasho ahayn oo doorasho ah maba dhici karto, aniga waxaa qabaa in doorasho ay dhici karto hadii si fiican loo shaqeeyo,” ayuu yiri Faroole.
Dhanka kale, Faroole ayaa ugu baaqay Xasan Sheekh in haddii uusan waxba qaban karin inta uga hartay xilka uu is-casilo, isagoo intaas ku daray in waqtiga haray uu aaminsan yahay in wax la qaban karo, sida meelaha khilaafka ka jira laga heshiiyo.
“Waxaan leeyahay Xasan Sheekh haddii aadan waxba qaban karin isaga tag xilka, C/llaahi Yuusuf-ba maalin buu ka tagay isagoo aan xilligiisu dhamaan, ceebna ma ahan haddii aad is-casiho oo sheegto inaadan waxba qaban karin,” ayuu yiri Faroole.
Maamulka Gobolka Nugaal oo Waxgarad u Diray Deegaanka Qoriley
Itoobiya oo Tababar Siisa Dhalinyarada Gobolka Bay